Module Dallacaadda Ev, Ev Dc Module Dallaca, Ev Charger Module - UUGreenPower
Qaybta dallacaadda ilaalinta sare ee IP65 waxa ay qabataa tignoolajiyada ugu dambeysay ee sahayda korontada iyo tignoolajiyada kala daadinta kulaylka, waxaana si gaar ah loogu talagalay gawaadhida korontada ku dallaca ee awoodda sare leh ee dibadda ah.Heerka ilaalinta deegaanka waxa uu gaaraa IP65, kaas oo la qabsan kara bey'ad adag oo kala duwan sida boodhka, ceeryaamo milix ah iyo uumi.
UBC 75010 bidirectional V2G dallacaadda raso si weyn loo isticmaalo in dallaca iyo jawaab celinta tamarta u dhexeeya baabuurta rakaabka korontada iyo korontada .Its qiimaha codsi been in lagu qanciyo dallacaadda maalinlaha ah ee baabuurta rakaabka korontada, iyo si wax ku ool ah u ciyaaro doorka tamarta batteriga gaariga unug kaydinta tamarta, garashada U dallacaadda habaysan ee korontadu, maamulka dhinaca baahida korantada, qiimaha isku dhafan ee grid-yar iyo Internet tamarta.
UR100030-SW EV module charger si gaar ah loogu sameeyay EV DC super charger.Waxay leedahay kala duwanaansho koronto oo ballaaran oo soo saarid koronto joogto ah.Sidoo kale waxa ay leedahay arrin awood sare leh, hufnaan sare, cufnaanta awoodda sare, isku hallaynta sare, xakamaynta caqliga leh iyo faa'iidada muuqaalka quruxda badan.Farsamooyinka kontoroolka dhijitaalka ah ee la xiri karo iyo kuwa caqliga leh ayaa wada shaqeeya si loo saadaaliyo kahortaga fashilka iyo hubinta isku halaynta sare.
Module-ka kormeerka ku dallacaadda ee umev04 waxa uu ku qalabaysan yahay shaashadda midabka taabashada LCD oo waxa uu leeyahay is-dhexgal bini'aadmi iyo kombuyuutar oo la gaaryeelay.Waxaa si gaar ah loogu talagalay jaangooyooyinka Yurub iyo halbeegga Japan ee ku dallaca gaadiidka Korontada.Waxay taageertaa CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, iwm.
MAXAA LOO DOORANAYAA
Waxaan aaminsanahay in abuurku yahay hubka kaliya ee xoogga badan si loo helo saameyn sumadeedka wanaagsan.
Oo waxaan isticmaali doonaa abuurista inta lagu guda jiro dhammaan alaabta design shaqada.
Kooxda R&D ee xirfadleyda ah
Ka go'an inuu noqdo alaab-qeybiyaha ugu wanaagsan ee qaybaha xudunta u ah saldhigga dallacaadda super.
Ku dhawaad ​​20 sano oo waayo-aragnimo horumarineed ah
Ururinta tignoolajiyada awooda DC ee labaatankii sano ee la soo dhaafay waxay aasaas adag u dhigtay horumarka hadda socda.
Naqshad cusub oo horumarsan
Waxaan ku adkeysaneynaa naqshadeynta cusub waxaanan isku dayeynaa inaan naqshadeyno moduleka dallacaadda super ee saldhigyada dallacaadda sare.
Dammaanadda adeegga tayada
Ma bixinno oo kaliya adeegga iibka kahor ee fekerka leh, laakiin sidoo kale tayada sare ee adeegga iibka kadib.
● IP65 difaac sare
● Kala wareejinta labada dhinac...
Waxtarka sare ee Ultra: the...
● Waxtarka aadka u sarreeya: t...
Shayga UMEV04 DC gudaha...
Diirada saar ikhtiraacida korantada elektaroonigga ah, xalliso barta cidhiidhiga ah ee dhibaatada.
Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd, oo la aasaasay 2015, waxaa ka go'an inay noqoto alaab-qeybiyaha ugu fiican ee qaybaha asaasiga ah ee saldhigyada dallacaadda super.Shirkaddu waxay leedahay koox xirfadle ah oo korantada korantada R & D ah, ku dhawaad ​​​​20 sano oo ururinta tignoolajiyada korantada DC, iyada oo loo marayo naqshad cusub, si loo abuuro taxane 40kW, 30KW, 20KW, 15KW super charge modules oo loogu talagalay saldhigyada sare ee dallacaadda.
Shenzhen UUGreenPower waxay u hoggaansamaan macaamiisha-udub dhexaad u ah, aragtida xirfadeed, diiradda saaraya koronto cusboonaysiinta tignoolajiyada elektiroonigga ah, xallinta barta cirridka macaamiisha, la korinta macaamiisha, iyo si wadajir ah kor u qaadida tamarta cagaaran iyo dhaqaalaha-yar ee kaarboon ee warshadaha baabuurta korontada.